Site Transposh - Ịkwụsị asụsụ mgbochi - The transposh.org wordpress ngwa mgbakwunye ihe ngosi na nkwado na saịtị
Version 1.0.3 – Gịnị mere ị zitere m ozi?
August 5, 2018 site na rịọ Ahapụ a Comment
Anyị nwere oké obi ụtọ ịkpọsa Kacha ọhụrụ version, tọhapụrụ ụnyaahụ.
Nke a version bụ niile banyere mail feature, na ụmụ mmadụ translation management ndozi.
The mail atụmatụ ga-enyere ndị admin na-Ịma Ọkwa na mmadụ nsụgharị mere na saịtị, na free version ị ga-enweta a ozi ka anya dị ka a ọhụrụ translation na-ezitere. Na full version ị nwekwara nhọrọ na-ekwe ka ozi echekwa (otú ị ga-enweta otu ozi mgbe a ọrụ sụgharịa ụfọdụ ndido urụk na saịtị). Ị nwekwara nhọrọ na-enweta a kwa ụbọchị iyochapu nke ọhụrụ nsụgharị mere na saịtị. Ị nwekwara ike họrọ adreesị nke ozi ga-eziga, dị nnọọ ahapụ ya oghere maka onye nchịkwa si email.
Akụkụ ọzọ nke na-mma na a version bụ backend translation nchịkọta akụkọ, mgbe ọ ka na-adịghị ekwe ka ị na-asụgharị na backend, i nwere ike ugbu a jikwaa nsụgharị na ala site na iji nzacha mma na e kwukwara na nnukwu omume na ugbu a n'ezie na-arụ ọrụ. 🙂
Anyị na-atụ anya na-anụ gị ntinye, na anyị na-atụ anya ka ị ga-enwe a ọhụrụ ntọhapụ
Gbara akwụkwọ N'okpuru: General Ozi, Hapụ ọkwa, Software mmelite
Version 1.0.2 – Gwa m ebe i si na m ga-…
July 22, 2018 site na rịọ 2 Comments
Nke a version na-agbakwụnye na-akwado Geographic IP dabeere nchọpụta nke siworo a rịọrọ feature maka ole na ole gara afọ (Mgbe dinos chịrị).
Olee otú otu nwee nkwado maka nke a nchọpụta? Ọ na-adabere ná ndị magburu onwe GeoIP nchọpụta plugin site yellowtree.de. Mgbe wụnye na rụọ ọrụ na mgbakwunye nhọrọ ga-egosi na ntọala dị n'okpuru ACCEPT_LANGUAGES nkụnye eji isi dabeere nchọpụta. The mma interface ga-egosi gị ihe ga-eme maka gị onwe gị nchọpụta mgbe ị na-na ịnweta ochichi panel.
Ọzọkwa na-akọwa, anya isi gị na saịtị na-e dere na Bekee na nwere nkwado maka Spanish. A ọrụ eleta Spain, asụsụ ga-ibugharị Spanish (First njikọ nke oge). Ọ bụrụ na a ọrụ eleta Germany ọ bụ ezie na asụsụ achọpụtara dị ka German kemgbe asụsụ na-adịghị nyeere saịtị ga ébé ndabara version.
Mgbe ma nhọrọ na-nyeere, na ACCEPT_LANGUAGES ga-ụzọ.
Atụmatụ a na-akwado ma na free na full version.
Ọ bụrụ na ị na-ahụ ọ bụla misredirection mgbe a mma na-nyeere (Ọ na-e-anọ nwa oge nyeere ebe a maka ule) biko, ka anyị mara site na kọntaktị ụdị.
Dị ka mgbe niile, anyị na-atụ anya ka ị ga-enweta ihe a version.
PS. Ọ bụrụ na ị na-eji a tupu full version na update ka Kacha ọhụrụ full version na-adịghị na-egosi (naanị update na free version) egbula – kwalite ka free version mbụ, mgbe ahụ, ozugbo iso site upgrading ka full version, dịghị ntọala ga-aba.
Version 1.0.1 – Your wijetị, ụzọ gị
July 6, 2018 site na rịọ 2 Comments
Nke a ọhụrụ version, na nso nso nyak, nyere anyị na abụọ ọhụrụ atụmatụ:
Akpa, ike ibu wijetị gị bulite dir (na-ọzọ kpọmkwem, wp-content/uploads/transposh/widgets), nke a bụ maka onye ọ bụla bụ onye kere ya wijetị (ma eleghị anya, dị nnọọ na-agbanwe agbanwe a ọkọlọtọ) na nwere nsogbu emelite plugin n'ihi na nke ugbu a wijetị folder ọkọdọ overridden, a mma na-emepe elu-ekwe omume ịkọrọ wijetị na ndị ọzọ.
The abụọ mma bụ na mgbakwunye na nke Google “Asarel = ọzọ hreflang” usoro, nke a na-ihu ọma iji n'ụzọ zuru ezu ruru eru URLs nke ọ bụla dị otú ahụ akwụkwọ kama ikwu URLs, a enwekwu size gị htmls site a ọtụtụ (dabere na ọnụ ọgụgụ nke asụsụ ị na-akwado, dị nnọọ ba uba a nọmba site size of address of gị na saịtị na i nwere ike ngwa ngwa tinye 1k maka ọ bụla ọ rịọrọ maka ihe ọ bụla). Anyị ugbu a recommandation bụ nnọọ iji gbanyụọ nke a mma, ma ọ bụrụ na ị chọrọ a mma ahụmahụ Google si webmaster ngwaọrụ, aga n'ihu ma na-enwe fun.
Anyị olileanya na unu ga-enweta nke a version, egbula kpọtụrụ anyị maka ọ bụla chinchi / feature arịrịọ.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: General Ozi
Version 1.0.0 – The oge eruwo
June 16, 2018 site na rịọ 4 Comments
Transposh a ndụ n'ihi na nke ikpeazụ 10 afọ ma ọ bụ otú. Anyị mgbe niile wee na-ahụ plugin emelitere na anyị na saịtị ebe a, ma gbalịa ime ka n'aka na wordpress.org version ọrụ.
Dị ka nsụgharị ọfiọrọ iche na ọ ghọrọ esiwanye ike iji nọgide na abụọ nsụgharị. N'ihi ya, ndị wordpress.org version ọkọdọ leghaara anya.
Nke a na-agbanwe agbanwe na-amalite na taa ntọhapụ nke version 1.0.0 on wordpress.org na full version 1.0.0.1, nke ga-abụ ihe ọhụrụ ọkọlọtọ ebe a (full nsụgharị ga-akwụsị na ihe ọzọ .1)
Gịnị bụ ọdịiche dị n'etiti ndị na nsụgharị?
The wordpress.org version nwere a 5 asụsụ ịgba, na adịghị agụnye ọ bụla wijetị.
The full version nwere ọzọ atụmatụ, dịghị asụsụ ókè, wijetị support, na a backlink anyị na saịtị (nke ị nwere ike ịpụ na-ewepụ – agụ okwu)
Gịnị ọzọ dị ọhụrụ na nke a version?
Ofụri Esịt-anwale na PHP 7, ga-ewepụ annoyances na deprecation ọkwa
Source map nkwado maka anyị scripts, ikwe ka debug ha na ala
Ịmafe si FirePHP ka Chromelogger.
Enwe-eji nke a version!
Version 0.9.9.2 – Ọ bụghị a git
October 5, 2017 site na rịọ 32 Comments
Nke a version bụ ogologo ke Ndinam, ihe ọ bụla kwa fancy ebe a, fixes maka wordpress 4.7 na elu, asụsụ kwukwara (117!)
Ọzọ ndakọrịta fixes na-emebu stof.
Nke a were ụzọ karịa mkpa n'ihi na anyị nwere ka ịgbanwee na gburugburu ebe obibi site ochie na nkọ svn ọhụrụ na ekwe git. Nke n'ezie messed elu na a tọhapụ. Na-enwe olileanya na anyị ga-nyak ọhụrụ nsụgharị na a mkpumkpu oge etiti.
Obi ụtọ a na version.